Ogaden News Agency (ONA) – Ururka haweenka Al-Xasa/Saudi Arabia oo shir muhiim isugu yimid
Ururka haweenka Al-Xasa/Saudi Arabia oo shir muhiim isugu yimid
Posted by ONA Admin	/ September 15, 2013
Waxaa xalay oo taariikhdu ahayd 14/09/2013 magaalada Al-xasa shir qurux badan isugu yimid ururka haweenka somalida ogadeniya oo ay weheliyaan ururka OYSU. Shirkan oo ahaa mid si fiican looga soo qayb galay ayey ujeedaddiisu ahayd in la dardar galiyo wax qabadka ururka haweenka ee Al-xasa, Sacuudi Carabia.
Shirkan ayaa lagu furay aayadaha quraanka oo Sh. Mohamud Axmed akhriyey ka dib waxaa lagu soo dhaweeyay oo qudbad waafi ah ka soo jeediyey gudoomiyaha jahliyada Al-xasa mudane Khalif Maxamed Cabdi, isagoo si fiican u ifiyay muhiimada Ururka Haweenku u leeyahay halganka shacabka S.Ogadeniya. Ka dib waxaa madashii lagu soo dhaweeyey wakiilka Bariga Dhexe sheikh Cabdullahi Ciraaqi oo isna warbxin dheer goobtii ka soo jeediyey. Sheikh Ciraaqi wuxuu si gaar ah uga waramay waxyaalihii ka soo baxay kalfadhiggii 6aad ee JWXO oo la soo gaba gabeeyey 23/8/2013. Wuxuu sheikh Ciraaqi dadkii goobta joogay uga waramay tabar darada cadowga iyo awooda JWXO iyo weliba heerka maanta halganku marayo.
Waxaa kale oo goobta hadal murti leh ka soo jeediyey halgame kale oo lagu magacaabo sheikh Cabdullahi xareed ahna culimada ugu waaweyn Al-xasa ee jahliyada. Xaliimo wadani oo iyana ku hadlaysa afka ururka OYSU ayaa iyana qudbad koobaan oo nuxur leh dadkii la wadaagtay iyo weliba gabay aad looga helay oo dadkii dareenkooda soo jiitay.
Ardo Axmed Naasir (Ardo cad) oo ahayd gudoomiyaha cusub ee ururka haweenka Al-xasa oo goobtii shirka lagu doortey ayaa iyana ku booriday haweenkii shirka joogay isjacayl, wada shaqayn iyo isku duubni. Waxaa kale oo ay codsatay in gacan lagu siiyo xilkan loo magcaabay. Cali yare ayaa isaguna hadal gaaban goobtii ka sheegay , wuxuuna talo ku soo jeediyey in shaqsi kastaa naftiisa waydiiyo kaalinta uu halganka kaga aadan yahay, iyada qofkastaa sida uu dantiisa shaqsi uga fakarayo uu mida guudna uga fakaro.
Ugu dambayn waxaa lagu kala hoyday is afgarad iyo hawl wadaag.